GarageBand yakagadziridzwa kusanganisira Chinese maungira | IPhone nhau
GarageBand inogadziridzwa kuti iise chiChinese chiridzwa ruzha
Mhedzisiro mhedzisiro yakanaka kubva kuApple, chimwe chinhu icho, sezvaunoziva, chisati chave chichiitika, chaive nezvakawanda zvine chekuita nemusika weChina. Iyo iPhone 6 yakatengeswa chaizvo munyika huru yeAsia, asi zvinhu zvanga zvichimonyoroka mumwedzi yapfuura, ichiona kuvharwa kwezvimwe zvezvinhu zveApple munyika. Zvichida kuti zvese zvakaitika zvine chekuita nerondedzero yenhau dzakaverengerwa mukupedzisira kugadzirisa kwe Garageband, zvese zveIOS uye OS X.
Nezuro, Apple yakaburitsa gadziriso kuGarageBand. Chii chingave nhau dzeimwezve App Store yekuvandudza, muchokwadi izvi hazviratidzike mune rondedzero yenhau, zvinomira kuva apo takaona Apple iyo yaida kupemberera «iyo yakapfuma yeChinese nhoroondo yemimhanzi ine zviridzwa zvitsva» kuwedzera ruzha uye dudziro yechiChinese yakakura kune iyo yese application. Sezvo isu tichigona kuverenga muBusinessWire, iyo nyowani vhezheni yeGarageBand inosanganisira zviridzwa zvitsva, senge pombi, iyo erhu neChinese kurovera, uye mazana matatu malupu (sampuli dzinogona kushandiswa kanoverengeka sechiuno, chakakodzera zvakakwana) zvakajairika zveChina.
Chii Chitsva muGarageBand 2.1.1
Pamusoro penyaya dzine chekuita nemumhanzi weChinese, GarageBand 2.1.1 inosanganisira.
Kurumidza kufamba kuburikidza nemarefu runyorwa rweApple Loops nekuda kwearufabheti padivi.
Uchishandisa Multi-Kubata manenji kusarudza akawanda matunhu panguva imwe chete munzvimbo yeTreches.
Kutumira nziyo sefaira rekuteerera uchishandisa AirDrop.
Kugona kugovera nziyo dzeGarageBand kuburikidza neemail seasina kumanikidzwa odhiyo.
Kugovera yako pachako yakasarudzika mifananidzo kune nziyo dzakagovaniswa paYouTube neFacebook.
Tsigiro yeakagovaniswa iPad chimiro muIOS 9.3.
Kana ndichifanira kutaura chokwadi, ini, ndakagadzirisa zvakawanda neGarageBand, ndinoshamiswa kuziva kuti masampuli, zvishwe uye zviridzwa zveChinese zvaisawanikwa mukushandisa, asi ndinofanira kureurura kuti ini ndinowanzo shandisa zvandinonyora nezviridzwa zvangu uye kwete manzwi uye mhedzisiro yandinopihwa nechishandiso. Chero zvazvingaitika, chero mari isingabvisike kune rumwe rutivi yakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » GarageBand inogadziridzwa kuti iise chiChinese chiridzwa ruzha
Wakaneta neApple uye nemipimo yayo miviri muApp Store
Kwete seizvi, Apple, kwete seizvi: iOS 9.3.2 inopaza imwe iPad Pro ine Kanganiso 56